Sidee loo ogaadaa haddii Linux Mint uu faddaraysan yahay? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loo ogaadaa haddii Linux Mint uu faddaraysan yahay?
210 | | Qaybinta, GNU / Linux, Noticias
Bishii Febraayo 20 caanka ah ee caanka ah, Linux Mint, waa la jabsaday. Warar uu ku dhawaaqay agaasimaha qaybinta Clement lefebvre.
Asal ahaan, khayaanada, oo isku magacaaba Nabada, wuxuu ku guuleystaa inuu sameeyo mahadsanid a cilladda amniga goobta, oo ku taal sheyga WordPress. Isla gudaha barta, haakarisku wuxuu saameeyay aagga soo dejinta, isagoo ka weecinaya xiriiriyeyaasha soo dejinta Linux Mint 17.3 64-bit oo leh Cinnamon Desktop ilaa server aan amaan aheyn.
Linux Mint ISO la soo dejiyey, ayaa ku dhex jira Farsamooyinka Tsunami. Taasi waxay u oggolaanaysaa haakarisku inuu abuuro jebin ula kac ah si uu si xun ugu helo nidaamka. Sidan ayaad ku abuuri kartaa botnet, adoo xakameynaya kombiyuutarada cudurka qaba. Sunaami ayaa loo isticmaalay munaasabadihii hore si Weerarrada DDoS.
Muddo dheer kuma qaadanin isticmaaleyaasha Linux Mint inay ogaadaan waxa oo dhan, sidaas darteedna ay qaadaan tallaabooyinka amniga ee lagama maarmaanka u ah in aan loo oggolaan sawirrada ISO ee wasakheysan inay sii faafaan.
Linux Mint 17.3 ayaa sidoo kale lagu soo warramey inuu yahay nooca keliya ee ay saameysay.
Waxaa la ogyahay in haakarisku qorsheeyeen inay fuliyaan a 32-waxoogaa nooc ah oo leh koodh xun oo Linux Mint 17.3 ah oo leh desktop Cinnamon, laakiin way ku fashilmeen inay fuliyaan.
Linux Mint 17.3 Cinnamon Desktop version Nooca ay saameysay
Waxaa la xaqiijiyay in Hackers-ku waxay ku guuleysteen inay soo saaraan xogta shaqsiyadeed iyo xogta madasha laga soo qaado websaydhka laba jeer: markii ugu horreysay 28-kii Janaayo iyo ka dib Febraayo 18. Macluumaadkan waxaa ka mid ah: Magacyada isticmaaleyaasha madasha, nuqulka sirta ah ee sirta ah, iimaylka, macluumaadka shakhsiyeed ee laga helo boggaaga iyo nooc kasta oo macluumaad shaqsiyeed ah oo lagu qoray bogagga.
Kooxda Linux Mint waxay ku sameeyeen sixitaanka lagama maarmaanka ah boggooda. Hadda waxaad kala soo bixi kartaa, si badbaado leh oo aan lahayn hanjabaad, Linux Mint iyada oo loo marayo xiriiriyeyaal toos ah ama BitTorrent. Sidoo kale haddii rakibaaddaadu aysan lahayn nusqaanno xagga amniga ah, waad sameyn kartaa cusbooneysiin adiga oo aan dhib kugu qabin.
Sida kaliya ee aad ku heshay qaab xun waxay ahayd adigoo ku soo raacaya muraayada isku xidhka muraayadaha, si aad u soo dejiso nooca 64-bit ee Linux Mint oo leh miiska Cinnamon, tan inta lagu jiro maalinta Sabtida Febraayo 20.
Si loo hubiyo in Linux Mint ISO-gaagu aamin yahay waa inaad isticmaashaa kumbuyuutar Linux ah oo aad ku socotaa amarka soo socda md5sum tuArchivo.iso halkaa tuArchivo.iso waa dariiqa iyo magaca faylka aad soo degsatay.
Liiska soo socda ee MD5s ee ansax ah:
Haddii aad ogaato in lambar alifa oo kala duwani ka duwan yahay, isla markiiba tirtir faylkamaadaama laga yaabo inuu cudurka ku dhaco ama waxyeelo soo gaarto.
Haddii ay dhacdo inaad haysato sawirka ISO ee DVD ama aaladda USB, laakiin aadan wali rakibin, samee waxyaabaha soo socda: Ka jooji kombuyuutarkaaga internetka, ka dibna bilow fadhi toos ah Linux Mint. Tan ayaa sameysay, raadi feylka soo socda /var/lib/man.cy. Haddii aad aragto, sawirkaaga ISO ayaa qaba. Xaaladdan oo kale, ka takhalus DVD-ka ama qaab u samee aaladda USB-gaaga.
Haddii nasiib daro aad ka mid tahay kuwa badan ee cudurka qaba, qaado talaabooyinka soo socda:
Ka jar kumbuyuutarkaaga internetka.
Nuqul nuqul ah ka samee xogtaada shaqsiyeed.
Ku rakib nuqul cusub oo nadiif ah.
Badal ereyada sirta ah ee shabakadahaaga oo ay kujiraan macluumaad gaar ah.
Soo celi xogtaada shaqsiyeed.
Dhibaatadu maahan oo kaliya in isticmaaleyaal badani ay soo dejiyeen ISO wasakhaysan, laakiin sidoo kale xaddiga macluumaadka laga soo saaray isticmaalayaasha kala duwan ayaa walwal leh. Hal dariiqo oo lagu hubiyo in xogtaada la xaday waa adigoo galaya websaydhka MADAXWEYNAHA si loo xaqiijiyo.
Isticmaalayaashu waxay u badan tahay inay adeegsanayaan isku erey isku mid ah bogagga internetka ee kala duwan, sidaa darteed waxaa muhiimad gaar ah siinaya muhiimadda badalida furaha sirta ah ee bogagga kale ee aad ku leedahay macluumaad xasaasi ah.
Muhiimadu waa inaad ilaaliso macluumaadkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Sidee loo ogaadaa haddii Linux Mint uu faddaraysan yahay?
Waxaad wax ka qortaa jabsadayaasha tiro ahaan sidee ku ogaaneysaa inay jiraan wax kabadan hal sawir sawirka iso oo aan kahelay LinuxMint Cinnamon wuxuu marayaa 6.12 tag. Sidoo kale, tan iyo maalintii ka hor 20.2 ma aanan bilaabin LinuxMintDebian Rosa, maadaama aan ku rakibay kombuyuutar xoogaa duug ah. Maanta waan kiciyay oo si ballaaran ayaa loo cusbooneysiiyey. Si kastaba ha noqotee, waan tuurayaa amarrada aad kugula talinayso waxaanan arki doonaa natiijada.
Lama oga inuu ahaa hal hacker ama koox. Waxay kaliya ka tageen astaanta Nabadda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, u nuglaanta ayaa looga faa’iideysan karaa websaydhada kala duwan, waxaa jiri kara dhowr haakaris oo ka faa’iideysanaya.
Haddii aad soo degsato bisha Diseembar waa inaadan wax dhibaato ah qabin, waligeed dhib malahan inaad isku daydo ...
Haddii aad ka diiwaangashan tahay barta 'Mint forum', waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato taxaddarrada aan soo sheegnay
Iyagu ma ahayn kuwo wax jabsada laakiin waxay ahaayeen dambiilayaal internetka, sida uu Chema Alonso si aad u wanaagsan u leeyahay
Halkan waxaan ku sameeyaa falanqeyn wanaagsan, dhab ah oo faahfaahsan ka dib markii la isticmaalayo Linux iyo Windows muddo aad u dheer. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ogolaadaan kuwa kalena aysan ogolaan, laakiin taasi waa sida aan u maleynayo.
GNU / Linux waa mid xasilloon oo ammaan ah, laakiin adeegsadaha guryaha, ka beddelashada Windows illaa GNU / Linux waa baaldi biyo qabow oo xagga dambe ah.
Si kale haddii loo dhigo, qof isticmaalay Windows, oo dhageystay mp3-yadooda, daawaday filimaan, soo dejiyay filimaan, ciyaaray ciyaaro, lahaa gamepad-ka, webcam-ka, wifi, kaarka muuqaalka, iskaanka, daabacaha hadda waa inuu ogaadaa waxa ay yihiin wadayaasha lahaanshaha, wadayaasha lahaanshaha, amarrada (Terminal), ereyo sharciyeed ku saabsan darawallada iyo koodhadhka?
Ma aha in la xuso daabacaadda: Daabacayaasha HP waxay la yimaadaan darawaladooda iyo CD-ga ay ka shaqeeyaan, si ay u daabacaan tayo sare, oo keliya kaydadka khad madow, dhaqaale dhaqso leh ... ee Linux, barnaamijka HP wuxuu ku yimaadaa Ingiriis iyo guud ahaan xulashooyinkaas, oo aad ayuu u daabaca yaab leh.
Marka laga tago Microsoft Office gadaal, waa maxay barnaamijka ugufiican ee xafiiska? Ciyaaraha, jooji ka faa'iideysiga kaarka sawirada ee xoogga badan. Ma aha in aan xuso in ay jiraan hooyooyin badan oo aan lahayn darawallo wanaagsan oo ku shaqeeya linux?
Aniguna waan gaabsanayaa, haddii aan ka hadlo maaddooyinka wax lagu duubo iyo qaababkoodaba!
Waxa kale, waxaa jira is burinta ku jirta GNU / LInux. Dhinaca kale, waxaa jira kuwa taageera software-ka macaamiisha iyo kuwa dhaha in Linux aysan gebi ahaanba xor aheyn.
Iyo haa mudane: LINUX FASHIL, WAA QALAD KU FILAN, mararka qaar marka la bilaabayo, waqtiyo kale oo la fulinayo, marar kale midnimo ama KDE ama GNOME ayaa shilal ah, iyo sidoo kale sida Windows oo kale, isla markaana akoonka isticmaalaha ayaa waxyeelloobey! isku mid uun! Waxaan tan uga leeyahay waayo-aragnimada canaima GNU / Linux iyo nidaamyada canaima waxbarasho! Boqolaal kombiyuutarro ku dhaawacmay suuqa, carruurta isticmaasha canaimitas, oo wata GNU / linux, aad ayey u fashilmaan.
Kuwa aan aqoon canaima, waa mashruuc ay leedahay dowladda Venezuela, iyadoo la adeegsanayo GNU / linux.
Tusaale ahaan, UBUNTU ayaa ugu caansan, si kastaba ha noqotee difaacayaasha GNU / Linux waxay kugula talinayaan in aan la isticmaalin, laakiin loo beddelo qaybinta sida Trisquel, oo shaqsiyan u ah baaldi kale oo biyo qabow: la'aanta wadayaasha, gaar ahaan WIFI. Waana inaad u beddelataa Trisquel si aad "xoriyad ahaan" u hesho "xoriyadda", markaad lumiso xorriyadda maxaa yeelay ma isticmaali kartid PC-gaaga.
Sidoo kale, waxyaabo badan oo aadan sameyn karin adoo adeegsanaya GUI (garaafka isticmaalaha garaafka) adigoo adeegsanaya amarro, Terminal. Midkee ayaan u arkaa dib-u-dhac, qarnigii XXI iyo xitaa isticmaalka konsollo, sida 80-maadkii? Fadlan, hadda waa waqtigii loo isticmaali lahaa isdhexgalka shaxanka: amarro ka yar iyo kontaroolo badan oo garaaf ah.
Isticmaalaha Guriga, waxaan u maleynayaa in GNU / linux ay aad uga yar yihiin. Dhinacyo farsamo iyo sharci intaba. Waxaan u arkaa Linux aad u fiican sida warshadaha: barnaamijyada, aaladaha, kombiyuutarrada, kombiyuutarrada websaydhka, nuqulada nuqul, wifi server (oo aad loo isticmaalo), iyo waxyaabo la mid ah. Maaddaama warshaduhu ay "ka baxayaan baqalka" adoo bixinaya xuquuqda isticmaalka softiweerka, iyo sida ay u fiicantahay in Linux aysan ku bixinayn xaquuqda ama u adeegsan xuquuqaha: iyaga oo la qabsanaya nidaamyadooda gundhigga ama warshadaha.
Tusaale ahaan, Windows wuxuu siiyaa khaladaad badan ATM-yada ama mashiinnada mashiinnada tooska ah, Linux haddii ay ku fiicnaan laheyd halkaas maaddaama kuwa wax sheega ay yihiin kuwo aad u culus, Windows-na waa u jilicsan yahay shaqada noocaas ah. Linux waa nidaam saacad 24 ah, 365 maalmood sanadkii :)
Isticmaalaha guryaha, nidaam aad ufudud badan oo kafiican ayaa ugafiican, sida Windows.
Anigu waxaan ahay dayactir kumbuyuutar, dhawaana waxaan ku dhejiyay Linux kumbuyuutar. Dhowr maalmood ka dib wuu soo noqday isagoo ii sheegaya inuusan jeclayn, oo aan ku celiyo daaqadaha.
Waxyaabo kale, waxaa jira dhadhan aad u tiro badan iyo qaybin, taas oo ka dib markii dhan ka dhigto waqti badan oo lagu yareeyo isos, waxaana jira waxyaabo qaar ay leeyihiin qaarna aysan lahayn.
Hagaagna waxaan kuhelay softiweer aad ufiican linux, oo aanan xitaa ogeyn isticmaalka daaqadaha, sida VLC, playitslowly, Stellarium (sifiican ugama shaqeeyo Windows), Gimp, iyo kuwa kale.
Aniga ahaan waxa ugu muhiimsan ma ahan OS, laakiin waa barnaamijyada ka shaqeeya halkaas, oo waxtar leh. Windows-ka oo aan lahayn barnaamij la jaan qaada waa qashin!
Shakhsi ahaan, Linux waxaa loogu talagalay warshadaha.
Jidka agtana, waxaan qoraa maqaalkan anigoo adeegsanaya Ubuntu, iyo google chrome (taas oo ah habka, xitaa google chrome uusan ka muuqan dukaanka, waa inaan sameeyaa tabaha lagu rakibo)! Waxaan u haystaa si tijaabo ah, waxayna ku kacaysaa rakibideeda: saacado iyo saacado soo degsiinta cusbooneysiinta iyo soo dejinta darawalada lahaanshaha!
Kobaca Linux waa hawl socodsiin, sida ugu dhow dhammaan barnaamijyada.
Waad ku saxsan tahay inaad tilmaamto in Linux loogu talagalay warshadaha waana xaqiiqo in ay xukumaan adduunka server-yada iyo nidaamyada la galiyay.
Laakiin taasi maahan sababta aad u lumineysid aaminaadda inay u noqonayso mid u habboon saaxiibtinimo. Waan ku raacsanahay inaysan ahayn nidaamka ugu isticmaalka badan saaxiibtinimo. Laakiin haddii aan falanqeyno horumarinta isdhexgalka shaxanka, sanadihii la soo dhaafay horumar la yaab leh ayaa la sameeyay.
Waxaan dhihi karnaa inay tahay waqti go'an in khibrada Linux loo barbardhigo tan Windows, marka waa inaadan quusan oo aad joojiso inaad ushaqeyso waqtigan.
Maalin kasta darawallada ayaa horumariya, waxaan horeyba u haysannay Steam Linux, oo leh saldhig ciyaaraha hooyo ee Linux. Waxaan haynaa Steam Machines, consoles'yada - kumbuyuutarro jaban oo loogu talagalay ciyaaraha fiidiyowga.
Waan ognahay in DirectX uu yahay mid qaan gaar ah, aad u xasiloon oo aad u saaxiibtinimo badan kuwa horumariya, laakiin sawirada 'APIs' ee loogu talagalay Linux ayaa waxbadan soo hagaagayay. Sida oo kale, waa arrin waqti leh.
Waa in la ogaadaa in Microsoft ay hadda sii deyneyso qaar badan oo ka mid ah qeybaheeda gaarka ah ... Tani waa tilmaan muhiim ah, maadaama shirkadaha waaweyn ay ogaadeen faa iidada ay leedahay sii deynta barnaamijyadooda ama waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Kordhinta degdegga ah ee bulshooyinka xorta ah iyo xasilloonida ay bixiso waa mid aad u fiican, caddayn taas oo ah in ku dhowaad dhammaan qalabka ku jira adduunka weyn ee xogta ay yihiin Ilo Furan, Internetka Waxyaabaha ayaa ku mahadsan qalabka furan.
Sidaa darteed Dunida Furan ayaa xun sida aad soo jeedisay? Mise waa shaqo iyo dadaal uun?
Xusuusnow in falsafada 'Source Source' lagu soo koobi karo qaab waxqabad leh "Ha dib u abuurin shaagagga." Maxay tahay sababta loo maalgaliyo waqti iyo dadaal aadanaha si loo xaliyo dhibaato qof kale horey u xalliyay? Halkii aan ku xalin lahayn isla dhibaatadaas marar badan, waxaan ku dul dhisi karnaa wixii horey loo qabtay oo waxaan diirada saari karnaa dhibaatooyinka cusub.
Waan ku raacsanahay jawaabtaada. Laakiin waa macquul, waxaan ka aqaanay kumbuyuutarrada gacanta Unixware, sanado badan ka hor.
Kama faalloon karo nidaamka Microsoft maxaa yeelay waligay ma aanan isticmaalin, marka laga reebo qaar ka mid ah hijrada StarOffice ee markii hore lagu rakibay Windows OS wajiga koowaad, tan labaad Windows-ka waxaa lagu beddelay Debian.
Waxaan sidoo kale rabaa inaan kuugu mahadceliyo shaqada aad uqoreyso inaad kuqorto boostadaada boggan. Had iyo jeer waa kuwo xiiso leh oo had iyo jeer ku faraxsan akhriska.
Waxaan ka shakisanahay in Isbaanishka aad wax ku qortay uu ka yimid dhinaca kale ee Badweynta Atlantik, maxaa yeelay mararka qaar waxaan helaa tibaaxyo tilmaamaya asal ahaan Ibero-Mareykan.
Qorista qoraalkan waxaan ku helay khaladaad isku-dhafan oo (waxaan rajeynayaa inaadan dhib ka qabin) aad xallin kartid, haddii aad waqti iyo rabitaanba haysatid.
«Haddii ay dhacdo inaad haysato sawirka ISO-ga ee DVD ama aaladda USB-ga, laakiin aadan wali rakibin, fadlan samee waxyaabaha soo socda: Kumbuyuutarkaaga ka saar internetka, ka dibna bilow kal-fadhi Linux ah oo toos ah. Marka tan la sameeyo, raadi faylka soo socda /var/lib/man.cy. Haddii aad aragto, sawirkaaga ISO ayaa qaba. Xaaladdan oo kale, ka takhalus DVD-ga ama qaab u samee aaladda USB-ga ».
Waxay ku bilaabmaysaa "haysasho" taas oo noqonaysa "adigu waxaad leedahay"; waxay ku sii socotaa «ka-goynta», «bilaw», «goobid» waxayna ku dhammaataa «quusasho» (taas oo Isbaanishku noqon doono «kala-go») iyo «qaab qalabkaaga ah».
Taasi waa, waxay ku bilaabmaysaa iyadoo akhristaha loogu yeedho "adiga" oo ku dhammaata "adiga". Tan Isbaanishka ee Isbaanishka waa qalad. Ama adigu akhristaha ugula hadal adigu (waa habka ugu rasmi ah) ama adigu (waa habka ugu badan ee aan rasmiga ahayn, waa midka ay ka dhex adeegsadaan dhallinyarada is yaqaan).
Lagu qoray Isbaanishka Isbaanishka iyo daaweynta ugu rasmi ah, waa inay u egtahay sidan:
«Haddii ay dhacdo inaad haysato sawirka ISO-ga ee DVD ama aaladda USB-ga, laakiin aadan weli rakibin, samee waxyaabaha soo socda: Ka jooji kombuyuutarkaaga internetka, ka dibna bilow kal-fadhi Linux ah oo toos ah. Marka tan la sameeyo, raadi faylka soo socda /var/lib/man.cy. Haddii la helo, sawirkaaga ISO ayaa qaba. Xaaladdan oo kale, ka takhalus DVD-ga ama qaab u samee aaladda USB-ga ».
Salaan wacan 🙂
Ku jawaab Xurxo
Ciyaaryahanka VLC wuxuu aqriyaa waxa aad ku tuurayso, in kastoo aan doorbido Kodi inuu daawado filimada.
Ms Office kama fiicna mana liidato Libreoffice ama WPS Office dadka caadiga ah.
Waxaan hayaa HP MFP oo aan ku daabaco kuna sawiro dhib la'aan isticmaalka Xsane.
Kaliya waxaan ku ciyaaraa kamaradayda iyo aaladaha naqshadaynta.
Waxa aan ku siinayo sababta ayaa ah in Linux sidoo kale u jabto sida nidaam kasta. Laakiin waxaan u maleynayaa in Linux loogu talagalay qofkii doonaya inuu isticmaalo. Qof kasta oo aad barto Ubuntu ama wax kasta oo aan u ekaan "ganacsi sidii caadiga ahayd" wuu baqayaa. Waxaan aaminsanahay in mid kastaa xor u yahay go'aan qaadashada iyo xorriyadda oo si sax ah u awood u leh inay wax doorato.
Ka dib dhammaan waaya-aragnimadaydii Linux, taas oo ah mid aad u yar (waxaan sidoo kale ka imid Windows) Waxaan kaliya u hayaa ereyo mahadnaq iyo dhiirrigelin ah kuwa ka qaybqaata mashruucan cajiibka ah iyo bulshada. Waan jeclahay dhammaan dadka cadaabta ah!
Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada
Waan ku fahmay laakiin waa qaab xun, kuma xirna in isticmaalehu uu yahay isticmaale gudaha ah iyo in kombiyuutarkiisa gaarka ah si fiican loo taageeray. Isticmaal ahaan, kahor intaadan rakibin qaybsi gaar ah oo loo yaqaan 'GNU / Linux qaybinta' waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: 1.- Dooro desktop-ka ku habboon processor-kaaga iyo naftaada, haddii ay tahay aasaasi, processor hore, iwm. Waa inaad isticmaashaa mid fudud sida XFCE, Cinnamon, ..., haddii aad heysato kumbuyuutar awood badan isticmaal waxaad rabto laakiin ka taxaddar, haddii ay awood leedahay laakiin ay aad u kulushahay waxaad sameysay iibsasho xun waana inaad isticmaashaa mid fudud si uusan ugu dhowaan u xumaanin kuleylka dartiis. 2.- Abuur shaashad xusuus ah (qalin-wadis) oo leh qaybinta aad doorbideyso nooc saaxiibtinimo ah (Linux-Mint, Ubuntu, Canaima,…) iyo desktop-ka lagu xushay qodobka 1. 3. - Ka bilow qalinka qaab ahaan NOOL oo tijaabi dhammaan qalabkaaga, oo ay ku jiraan daabacaha, iskaanka, isku xirka Wi-Fi-gaaga, makarafoonka, kaamirada websaydhka, ... iyo haddii ay wax shaqeyn waayaan, haddii aanad fikrad badan haysan oo keliya iska jooji, la joog Windows-ka oo marka xigta kombiyuutar la qalab socon kara. Haddii aad hayso wax fikrad ah waad cusbooneysiin kartaa kernel-ka ugu dambeeya si aad u ogaato haddii qalabka durba shaqeynayo, haddii kale, ka tag fikradda ama hayso labalaab oo aad ku isticmaasho daaqadaha markaad u baahan tahay qalabkaas.
In qalab gaar ahi aanu shaqeyneynin khaladka Linux, laakiin kan wax soo saaraha, Windows-ka sidoo kale way dhacdaa, hadda qaadataa Sony Vaio SVF1521N1EW oo la yimid W8.1, u cusbooneysii W10 una macsalaameyso isticmaalka kamarada webka, maadaama wax kuu dhacaan. (Waxaan arkay mashiinka raadinta cortana oo shaqeynaya) nidaamka W10-na dib ayaa loo soo celiyey waxaad arki doontaa in kumbuyuutarka gadaal gadaal laga dhigaa uu yahay mid qarow ah oo la daminayo, Sony ma haysato barnaamijka Xarunta Xakamaynta VAIO ee loo heli karo Windows 10, iwm.
Haddii aad rabto Linux oo aadan u adeegsanin ciyaaro awood badan oo garaaf leh, si fudud u soo iibso Intel oo ay ku jiraan kaararka isugeynta Intel ee sabuuradda, tijaabi in wifi, webcam, iwm ay iswaafajin karaan. iyo haddii ay tahay ASUS iskuday inaad soo celiso xitaa nidaamka daaqadaha (42 euro jeebka): https://blog.desdelinux.net/devolucion-canon-windows/
Mario Domingues dijo
Saaxiibka wanaagsan qaarkood wuxuu jeclaan lahaa inuu haysto wax sida Rolls-Roice, oo leh awoodda F1, muuqaalka Lanborgini, iyo kuwa kale ee maydha sida qalabka codka u eg sida diskooga iyo ciyaarta fudud, iyo wixii la mid ah. Waad heli kartaa intaas oo dhan, oo faan, laakiin taasi waxay ku kacaysaa tikidh dheer, raaxadaasna ma bixin karaan ilmo kasta oo deris ah. Intaas waxaa sii dheer, qof kasta oo haystaa wuxuu awoodi doonaa oo keliya inuu u muujiyo asxaab aad u tiro yar, iyo nabadgelyo ku filan. Ma jirto wado looga baxo isaga oo la raacayo waddo kasta oo ciriiri ah magaalo kasta oo ciriiri ah maalin kasta oo ka mid ah usbuuca. Way burburaan, xadaan, u fiiriyaan qax, iwm. Waad riyoon kartaa, waadna riyoon kartaa, laakiin riyada noocan ahi waxay umuuqataa sida qarow oo kale. Taasi waxay noqoneysaa masxiiste. Taabadalkeed, waxaan naftayda u helaa Mac Book Pro 2015, ama mid cusub, oo waxaan ka fogaadaa silica badan. Haddii aan jeclaan lahaa xiisaha weyn ee Windows, halkaas ayaan joogi lahaa, iyo nasiib wacan.
Adeegsade dhimanaya adduunkan oo aan dhib ku ahayn wadaagista oo ku raaxeysanaya isticmaalka softiweer bilaash ah ayaa lagu soo dhaweynayaa inuu ku raaxeysto Waxa ugu horreeya waa in laga illaawo daaqadahaas buluugga ah oo ah mirage saafi ah. Marka labaad, waa ku filan tahay inaad ku wareegto dhowr ah Linux dxtros si aad u ogaato hodantinimada jirta, kaliya inaad ka walwasho barashada wax yar oo ah sayniska kombiyuutarka, oo la mid ah haddii aad isticmaali lahayd W. markii ugu horeysay. Xaqiijinta in wax kasta oo aad ka fikiri karto lagu sameyn karo GUI waa muuqaal nadiif ah, nalalka neon. Waxaan doorbidaa inaan ogaado waxa ku hoos jira qaabkan. Waxaan rabaa inaan gadaalka gadaashiisa u dhaqaaqo, anigoon caqli yarayn, aan ogaado waxa jira, iyo waxa meesha ka dhaca, iyo in ayna faraha saarin afkayga banaanka. Waxaan ku imid qorshahan si aan u ogaado adduunkan cajiibka ah ee ah software bilaash ah, Linux, iyo in aan ku bilaabo, Ubuntu waa bar bilow weyn, saaxiibtinimo ama in ka badan softiweer kasta oo lahaansho leh. Kama qoomameyno markaan ogaaday. Maalin walbana waxaan rabaa inaan waxbadan barto. Joojinta jaahilnimada, nacasnimada, kalsoonida iyo ku-tiirsanaanta waa in la bilaabo bilaash, bilaaba koriin, madax-bannaanid, go'aan ka gaarista noloshooda iyo, illaa iyo xad, wax ku biirinta si adduunkani uusan u noqon bulsho adhi ah. inay u baahan yihiin qof riixa ama jiida. Nasiib wanaagse waxaa jira dad aan murugoon oo la wadaaga aqoontooda kuwa kale oo laga yaabo inaysan helin fursado isku mid ah oo ay wax ku bartaan. Thanks to software-ka bilaashka ah, saboolnimada - inaan nahay inta badan meeraha, iyo inaanan awoodin karin raaxada qaarkood - waxay ka qaybqaadan karaan hantidan dhaqameed ee ah macluumaadka iyo tikniyoolajiyada isgaarsiinta. Iyo boggan 'Desdelinux' waa shirkad aad u fiican. Aad ayaan nasiib badan ugu nahay siyaabo badan: keligeen ma nihin, wax qiimo ahna nagama fadhiyaan, ama aad uga yar wixii aan ku maalgelin lahayn horumarka kale. Oo waxaad helaysaa qanacsanaan aan caadi ahayn.
Ku jawaab Mario Domíngues
Faalladayda is-hoosaysiinta ayaa ah tan iyo markii aan bartay dunida Linux oo leh noocyadeeda kala duwan (Ubuntu-Minth-Lubuntu iwm) waan xasilloonnahay waxayna ii dhammaystiraysaa dhammaan wixii aan ka filanayay ee Windows aysan sameynin (Waxaan dareemayaa inaan ahay addoon). sii wad nolosha ka dhigaysa mid aan macquul aheyn kuwa aan rabin inay wax wadaagaan oo danaystayaasha ah. Tani waxay nagu kalifaysaa inaan Patch iyo wixii la mid ah oo aan noqono oo aan noqono dambiilayaal kombiyuutar ah oo noocaas ah si aan uga baxno addoonsigaas, wax aan aniga hadda igu dhicin deegaanka Linux. Si aanan uga bixin mowduuca, waxaan u maleynayaa in jabsadayaashu u shaqeeyaan si ay u muujiyaan in Windows runti uu yahay fiasco oo uu ku dhashay si xun (caano xun) .Waddankeyga waxaan ku leenahay marka aad Putean dhagahaaga ka gubato kiiskeyga iyo sanadihii aan ii dulqaadanaayay Ma aqaano waxa Gubi kara BILL, waa hagaag, nasiib daro shaqadayda waxaan haystaa labo ama sadex codsi (wax ka badan) oo aanan ku xallin karin Linux laakiin inta kale oo dhan… ..sidaa darteed waxaan hayaa guul hore XP ama WIN 7 horeyba ula jiray Waxa imanaya madax xanuun ayaa igahayaa ma doonayo inaan sameeyo kaligiris shaqsiyadeed laakiin waxaan ku darayaa tan Paul Kelsey (taas oo aan ku raacsanahay ra'yigiisa) in shaqada kumanaan qof ay qabanayaan si ay u sameeyaan OS bilaash ah waa inaynaan BOYCOTT IT.
Sidii bilowgiiba waxaan si khushuucsan u idhi isku duubni dhammaan Olaf Albrecht
Mario zavala dijo
Tani waa war aad ufiican maaha kaliya waxa dhacay laakiin sidoo kale waa talaabooyinka laqaado ...
Jawaab Mario Zavala
Waxaan ahay isticmaale guri cusub Markii aan ka bilaabay adduunka kumbuyuutarka waxaan ku sameeyay Windows XP, laakiin markii aan ogaaday adduunka softiweerka bilaashka ah ayaan ku bilaabay oo kama qoomameynayo haba yaraatee, hubaal marka hore waa inaad barataa xeerarka aasaasiga ah haddii aad rabto inaad mashiinkaaga isticmaasho oo aad wax ku barato xiisaha, sida wax kasta oo nolosha ah. Qofna wax i siin maayo wax aanan horay u kasbanin Ilaa iyo inta uu jiro software bilaash ah waligey iibsan maayo kumbuyuutar Windows ah. Daabaceheyga, tan iyo markii aan bartay in aan udejiyo, weligey igama dhicin, in kasta oo aan ku qasbanahay in aan qirto in ay jiraan qaybisyo meesha tani wax xoogaa aan macquul ka ahayn, laakiin waa inaad dulqaad muujisaa oo aad isku daydaa inaad fahamto cilladaha ay waxyaalahan leeyihiin.
Xaqiiqdii waad saxan tahay, waxaan ka imid dhinaca kale ee Atlantic sida aad u leedahay hehehe Laga soo bilaabo Venezuela si aad u noqoto mid sax ah.
Runtii waan ku faraxsanahay sixitaankaaga qaabkaaga. Waxaan ku xisaabtami doonaa qoraalada mustaqbalka!
laga bilaabo linuz reexaanta
waxaad aadeysaa galka meesha iso yahay
midig u guji iso
rog si aad u hubiso ikhtiyaarka MD5
Sanduuqa qoraalka ayaa kuu soo muuqan doona adiga oo kugu wargelinaya MD5
waxaad u samayn kartaa si kale adigoon aadin terminalka: la soco waa inaad ka sameysaa minka linka ah ee kumbuyuutarkaaga lagu rakibay
Waxaad aadeysaa galka halka ay ku taal iso ee distoorka oo aad si sax ah u riixdo iso oo aad u dhaadhacdo xulashada hubinta MD5, waxyar sug oo waxaad heleysaa sanduuqa wada hadalka oo ku tusinaya isla
waxaas oo dhan waxaad ka sameyn kartaa Mint-ka Linux-kaaga lagu rakibay
Waad ku mahadsantahay macluumaadka si loo xaqiijiyo in aan cudurka qabno iyo in kale. Waxay tijaabisay taban.
..maxaa faraq ah oo uu sameeyaa .. dijo
Waad salaaman tihiin, marka hore waad ku mahadsan tihiin wadaagida macluumaadka (horay ayaan u arkay markii uu soo baxay).
Nasiib wanaag macaamiishayda, asxaabteyda iyo qoyskeyga marwalba waxaan ku rakibo nooca matte. Oo hadda 16.04 ayaa soo baxday, nooca Ubuntu saaxiibkiis horeba wuu u baxay.
Kuwa aan jeclayn dunida Gnu / Linux, ka jooji dhibta oo aad u bogaadiso dadaalka (deeqsinimada leh ee bilaashka ah) ee dadka ka dhigaya mid suurtogal ka dhigaya heerar kasta.
Anigu waxaan ahay isticmaale labada OS waxay kuxirantahay waxa aan ubaahanahay marwalba iyo shaqsiyan waxaan u maleynayaa in KA SAMAYSAN DHAMMAAN isticmaalaha guriga waa inuu isticmaalaa Gnu / Linux OS, maxaa yeelay hadii wax walboo shaqeynayaan waxay badbaadin doontaa madax xanuun badan iyo faylalka tacliinta (amniga iyo shatiyada), waad sii wadi kartaa inaad isticmaasho kombiyuutar duug ah adigoon cusbooneysiin.
Haddii aad u baahan tahay inaad adeegsato xoogaa software ama qalab ah KALIYA oo ku shaqeeya Windows-ka oo aadan haysan kombiyuutar kugu filan oo aad ku shaqeysan karto tusaale ahaan windows xp markaa shaqsiyan waxaan u maleynayaa inaadan ikhtiyaar u laheyn inaad isticmaasho Windows.
Iyadoo leh Windows (10), marka laga reebo dhowr saacadood oo aan si sax ah ugu qaabeeyo si fiican inaan u shaqeeyo waxaan u adeegsadaa: Antivirus (Avast), Malwarebyte Anti-Malware, Keyscrambler, Clover, VLC, 7-Zip, Flash Player, Deep-Freeze, Acronis true sawirka, Firefox, qolofta caadiga ah, Ccleaner, Soo nooleeyaha darawalka, gacan qabashada, Kodi, Gudbinta-QT, WinCDEmu, Qalabka dib loo soo nooleeyay, Teamviewer, VNC, Airdroid, Skype, Dropbox, Jdownloader, MouseServer, Silverlight, WPS Office bilaash iyo Virtualbox si loo isticmaalo Gnu / Linux. XD
Waxaan rajeynayaa inay u noqotay wax ku ool waxtar leh qaarna.
Wanaaga waa la wadaagaa!
Kujawaab .. gubay ..